Microsoft ayaa ugu digtay shirkadda la talinta ololaha Biden in uu jiro isku jabsasho oo ay… – Hagaag.com
Posted on 11 Seteembar 2020 by Admin in Technology // 0 Comments
Microsoft ayaa dhawaan uga digtay mid ka mid ah shirkadaha la talinta ee ugu weyn ololaha doorashada ee musharaxa Dimuqraadiga Joe Biden in bartilmaameed uu u yahay tuugada wax jabsata ee looga shakisan yahay in ay taageerto dowlada, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay Reuters.
Ilo wareedyadu waxay sheegeen in isku daygii jabsashada ee labadii bilood ee la soo dhaafay ee lala beegsaday shaqaalaha shirkadda fadhigeedu yahay Washington ee SKDKnickerbocker, taasoo ah shirkad maareysa ololaha Biden iyo kuwa kale oo caanka ah ee Dimuqraadiga.
Ilo xog ogaal ah oo arrintan la socda ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in jawaabta SKDK ay ka bixisay macluumaadka ku saabsan isku dayga jabsiga ay tahay inay xaqiijisay in burcadda ay ku guuldareysteen inay galaan shabakadaha shirkadda.
Waxay isha xogogaalka ah ay sheegtay in si fiican loo ilaaliyo, mana jirin wax jabsasho ah.”
Shirkadda Microsoft ayaa xadiday aqoonsiga jabsadayaasha in ay yihiin hackers uu Ruushka taageero.
Hillary Rosen, oo ah ku xigeenka madaxa shirkadda ayaa ka gaabsatay inay wax faallo ah ka siiso wakaaladda wararka ee Reuters, afhayeen u hadlay Biden sidoo kale kama uusan jawaabin codsi faallo ah.